एमाले पनि जमीनमा, माओवादी पनि जमीनमा
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड: पहिलो संविधानसभा चुनावको बेला म सम्झिन्छु, माओवादीले कहाँ चुनाव जित्छ, बढीमा चाररपाँच सिट जित्छ भन्थे मान्छेहरु । हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलको प्रस्ताव राख्दा उहाँहरुको कुरा पनि त्यही थियो । म आफैं पनि तड्पिराखेको थिएँ, के हुने हो, के ?
जे-जे पर्‍यो पर्‍यो, कुरो मिलेन, ४० र ६० गर्न अलि गाह्रो भो, त्यसो भएपछि हामफाल्यौं । परिणाम आउँदाखेरि बडो बिचित्रको आयो । हामी आफैंले पनि नसोचेको त्यति धेरै भोट आयो । त्यसपछि मैले भन्ने गरेकोे छु, माओवादीले धर्ती छाडेको हो । त्यो भोट माओवादीले पचाउनै सकेन क्या ? कहाँबाट आयो आयो ।
अर्कोतिर एमालेमा के बिचित्र भयो, कहाँ गडबड भयो भनेर रुवाबासी शुरु भयो । कुन होटलमा गएर रुनुभयो भन्ने पनि थाहा छ मलाई । यत्रो नेकपा माओवादीलाई २२३ सिट कम हो त रु एमालेको ३३ सिट ।
यति भएपछि उहाँहरु कता लाग्नुभयो भने माओवादीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा लाग्नुभयो । हामीभित्र के भयो भने, म त यहीँ छु मिलेर काम गर्नेमै छु तर हाम्राहरु पार्टी फुटाउनेतिर लागे । क्रान्तिकारी हुने होडबाजी चल्न थाल्यो हाम्रो त्यतिबेलाको माओवादीभित्र । र, चाररपाँच वर्षपछि अर्को चुनावमा जाँदा त ठिक उल्टो परिणाम आयो ।
Times 909499	Visited.